[ Politika ] 09 Febroary, 2009 16:54:: Voavaky in- (905)
Dia miondrika ampanajana amin'ireo zay namoy ny ainy tamin'ity raharaha nitranga teto Madagaskara ity ny tenako.
Eny tokoa, nisy ireo maty efa hatramin'ny Alatsinainy 26 Janoary ka hatramin'ny Asabotsy 7 Febroary teo dia efa mety feno 100 ny isan'ireo namoy ny ainy. Fa ireo tamin'ny Asabotsy teo iny no tena nahitana fa efa diso lalana isika mianakavy. Eny diso lalana isika raha misy milaza fa tsy maintsy misy sorona ny tolona. Eny diso lalana isika raha milaza fa mpandroba avokoa ireo olona milahatra sy mihaino ny kabary fanehoan-kevitra teny Ambohijatovo, teny amin'ny 13 mai, teny amin'ny kianjan'ny demokrasia tao Toliara, teny amin'ny Gara tao Fianarantsoa, sns ... tsy voatanisa etoana.
Eny diso lalana koa isika raha milaza na mihevitra fa mila miandry ny fe-potoana amin'ny fifidianana raha tsy afapo amin'ny fitondrana ara-dalana. Eny diso lalana ihany koa isika raha mihevitra fa eny andalambe no fara-hevitra ahafahana manongana fitondrana. Eny mbola diso lalana koa isika fa tsy mitombina ny fitakiana nataon'ireo milaza fa mitolona ireo.
Fehiny, DISO DAHOLO ISIKA MIANAKAVY! Miala tsiny miala fondro ny tenako raha miteny an'izany saingy ny zavamisy ankehitriny no manery ahy hilaza izany satria ireto ny antony :
- Tena sokina mananibato ve ny Mpitondra ka sahy nanamaivana ilay fihetsehana nitranga?
- Tena sokina nananibato koa ve ireo Mpitarika ny vahoaka ka tsy nianona tamin'ny kianjan'ny Demokrasia fa tsy maintsy nandeha teny amin'ny 13 Mai dia lasa nandeha nanimba ny RNM sy ny TVM ka nitatra hatrany amin'ny fananan'olotokana ary voaroba tao koa ny fananan'ireo olona hafa tsy mahalala izay antony nahavoaroba ny fananany. Ary tsy nionona teo fa nanohy ka niafara teny Ambohitsorohitra izay namoizana olona ampolony sy naharatrana olona anjatony maro.
- Tena sokina nananibato koa ve ireo Diplomaty vahiny teto Madagasikara ka rehefa nifampidinika indray mandeha dia nijanona teo.
- Tena sokina nananibato koa ve ireo Ray amandreny ara-panahy ao amin'ny FFKM ka efa hipoaka ny saro-bilany vao tonga hampihavana ireto mifanandrina.
Tsy sokina nananibato avokoa ireo voalaza ireo fa VOAN'NY FANDREKIREKENA daholo. Eny tompoko, raha tsy izany dia efa tokony nandray ny andraikitra tandrify azy avokoa.
Fa inona ary no nahatonga izany rehetra izany? Tena nahomby sy nahavoa ny HERIN'NY TSAHO. %3
(5) Hametraka hevitra (0) Verindrohy (trackback) Rohy maharitra